सडक देखेर ज्यानको डर लाग्छ, आफ्नै रिपोर्ट बनाउन अर्काे पत्रकार चाहिने हो कि ? – Gulmiews
सडक देखेर ज्यानको डर लाग्छ, आफ्नै रिपोर्ट बनाउन अर्काे पत्रकार चाहिने हो कि ?
१६ आश्विन २०७३, आईतवार १४:२८ Sanju Kauchha
वामी । बर्ष शुरु भएसँगै हिलाम्य भएका ग्रामिण क्षेत्रका सडकहरु अझै पनि बेहाल अबस्थामा छन । प्रशासनले मर्मत गर्ने कार्यलाई ढिलाइ गर्दा चालक तथा यात्रुहरुले निकै सास्ती भोग्दै आइरहेका छन । यही अबस्थाको सडकको रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ नेपालकै ब्यस्त मानिने करिब ४६ किलोमाटिरको रिडी रुद्रबेणी वामी टक्सार सडक खण्ड । जुन सडकमा यात्रा गर्नेहरुलाई मात्र थाहा छ कि सडकको अवस्था कस्तो छ भनेर ?
यस क्षेत्रमा जनताका नाममा राजनीति गर्ने राजनीतिक दलहरु तथा उनका कार्यकर्ताहरुले यती उती बजेट पर्याे भनेर फुइ लडाए पनि कुनै खालको प्रगती भएको छैन, बरु झन दुर्गती हुँदै गएको देख्न सकिन्छ । अझ वामी देखी कुर्घाको भुवाचिदी हुँदै आँपचौर सम्म जाने सडकमा खाल्डा उनी खाल्डाभरी हिलो पानीले गर्दा यात्रा निकै असहज हुने गरेको छ ।
सवारी चालक तथा यात्रुहरुले सडकको बिषयमा निकै गुनासो पोख्ने गरेका छन । वामी बाट बुटवलका लागि ट्रक लिएर जाँदै गएका गाडी चालक राम थापाले सडकको यस्तो हालतले आफुले निकै दुख पाएको कुरा दुखेसो पोखे । उनले भने “ यस्तो सडकमा गाडी लिएर हिड्दा आफ्नो ज्यानको पुरै जोखिम मोल्नुपर्छ, कहिले काँही बाटोमै गाडी फसेर बेहाल हुन्छ अनि आफ्नो पेशा तथा समग्र देशको अवस्था प्रति धिक्कार लागेर आउँछ ।”
आफ्नै रिपोर्ट बनाउन अर्काे पत्रकार चाहिने हो कि ?
त्यसैगरी हिलाम्य बाटोमा आफुलाई पनि हिलाम्य बनाउँदै यात्रा गरिरहेका सञ्चारकर्मी प्रकाश घिमिरेले पनि उस्तै दुखेसो पोखे । उनले भने “जोखिम मोलेर हिड्नु पर्छ, रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा यस्ता सडकका कारण आफ्नै रिपोर्ट बनाउनको लागि अर्काे पत्रकार चाहिने होे कि भन्ने चिन्ता लाग्छ । ” उनले जनताहरुले राजनीतिक दलहरुको झण्डा बोकेर पछि लाग्नु पनि बेकार भएको बताए ।
यस्तै सोही हिलाम्य बाटोमा पैदल यात्रा गरिरहेका वामी ९ का समाजसवी गोपाल खरेलले पनि आफ्नो गुनासो सडकको बिग्रदा स्थिती र राजनीतिक दलहरु प्रति नै पोखे । उनले बाटाको यस्तो अवस्था हुँदा पनि मर्मत तथा स्तारोन्नतीको लागि कुनै पहल नहुनु दुखद भएको बताए ।
करिब ४६ किलोमिटर रहेको यस सडकको स्तरोन्नतीको लागि निकै बर्ष भयो कुरा चल्न थालेको तर अहिले पनि काम शुरु भएको देख्न सकिएको छैन । गुल्मीको रिडी देखी मर्मत हुँदै आइरहेको भन्ने जानकारी आएता पनि वामी, कुर्घा तथा आँपचौरसम्मको यात्रामा सडकको अवस्था यही कुरुप देख्यौ हामीले । जस्ले यात्रुहरुको असहजता त थपेको छ नै दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ । यस तर्फ स्थानीय, सरोकारवाला, प्रशासन तथा राजनीतिक दलहरुको ध्यान जानु जरुरी छ ।